DAAWO: Muuse Biixi oo shaaciyay hadaladii ay is-dhaafsadeen Farmaajo & Rooble, markii ay Waceen – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DAAWO: Muuse Biixi oo shaaciyay hadaladii ay is-dhaafsadeen Farmaajo & Rooble, markii ay Waceen
April 9, 2022 Xuseen 8
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa uga mahadceliyay Madaxweyne Farmaajo, Ra’iisul Wasaaraha XFS, iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, dareenka walaalmimo iyo garab istaaga ay u muujiyeen Dowladda iyo shacabka Somaliland, kaddib dabkii qabsaday suuqa weyn ee Waaheen ee caasimadda Hargeysa.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, ayaa sheegay in ay xariir lasoo sameeyeen Farmaajo iyo Rooble, ayna kaga tacsiyeeyeen gubashada suuqa Waaheen, isagoo intaas ku daray in Ra’iisul Wasaaraha XFS uu u sheegay in uu hayo lacag uga timid Bangiga Adduunka, si Somaliland loogu kabo intii uu jiray cudurka COVID-19, taas oo uu ka dalbaday in si deg-deg ah loo soo gaarsiiyo, Waxaana uu uga mahad-naqay Ra’iisul Wasaaraha fulinta go’aankaas.
Muuse Biixi Cabdi, Mdaxweynaha Somaliland ayaa hadalkan ka sheegay kulan lacag loogu aruurinayay suuqa Waaheen, oo uu la qaatay ganacsatada waa weyn ee Somalind, kuwaas oo ku deeqay 8 Milyan oo dollar.
Amaanta adiga ma,ahan ee waa us dollar ka
“Af wax cunay xeshoo”
waxaa isleeyahay hadii loo badin lahaa maamul gadoodsan abuu bidaarka $ waxay oran lahaayeen “we are coming home ” 🏡 kkk
Lacagta Soomaaliya bixisay gebigeeduba waa hal milyan oo dollar marka laga reebo 2 milyan oo ganacsato ku balanqaaday inay iska soo ururin doonaan, inta kale waxay iyaguba qireen inay tahay lacagtii uu Somaliland ugu talo galay Banginga adduunku sannadkii 2021 si wax looga qabto abaaraha iyo Covidka.
Soomaaliya waa nimanka cahdigii la dhigtay shirkii London ee ahaa in aan deeqaha la siyaasadayn buriyey. Waad ogtahay waxa ay diinteenu ka qabto kuwa cahdiga ay galaan buriya.
Mida kale, Dhamaan wax kasta oo ummada Soomaaliyeed loogu talo galay in lagu caawiyo Muqdisho uun baa keligeed cunta, kuwa kale waxaan 10% ka ahayn baa soo gaadha. In balaayiintii dollar ee Soomaalida loogu deeqay Hal milyan Somaliland lagu soo tuuro miyaanay ceeb ahayn?
Intaad isku xishootaan reer Koonfurow iska daaya lacagta iyo caawimooyinka kale ee ummada Soomaaliyeed oo dhan loogu tala galay ee and keligiin Muqdisho ku cunaysaan.
Ha odhan ” af wax cunay xishood” waayo diinteena ayaa tidhi qofkii aan ummada u mahad naqini, Ilaahayna uma mahadnaqo.
Waxaanu nahay dad dhaqan iyo diin leh oo mahad celiya cidii wax na tarta, abaalna u haya
hal mlyan miyaa af cuney u taqaana ileyn qadaadweyn uunbad aheyd. munaasabada 8 million oo afar nin bixiyeen ayaa loo qabtey. 11 milionka kale zoomalia may laheyn waa lacag ay isbaaro u dhugatey
Waa indhoolayaasha iska guulwadeeya,
4 nin oo isaaqa keliya ayaa xalay ku dhawaaqay 8 milyan dolar, kuwa kalana way soo socdaan inay bixiyaan,
11 milyan awalba somaliland ayaa lahayd Armaajo iyo maafiyada ku hareeraysan iyagii ayaa bariiska gaaladu ka bixisaa ilaa mushaharkooda iyo waxwalba,
Bal bilow umada u sheeg lacagta uu armaajo iyo maafiyadiisu meesha ka keeni karaan,,
Benawaas baad tahay aan xayo iyo dadnimo lahayn umada ka xishood waa ramadaan hadaad runta ku dhibayso ama xigdi iyo xaasidnimadu kaa badatay is your proplem.
Jooji beenta iyo xasadka kaa soo burqanaya.
@BEN SHEGE IYO HARGEYS BOY
1, biixi iyo waraabe
haday madax kuu yihiin qadaad weyn iiguma caydeen
2, mar hadaad liqdeen 1.000.000 dollar
Ma waxaad inkireysaa waxaad liqdeen oo ah canshuurtii dowlada Somalia aad kamid tihiin 3,mise waxaad leedahay lacagta baad baan uga qaadanay Somalia kkkk
biloow malaa taariikhda kaa khaldane intanu somalia caawiney dib ugu noqo, guntuunba ka daba hadasha shilimad ay bixiyeen iyagoon awalba awoodin wax weyn, caawimadii aduunko dhanbanu idiin dayney gobonimo awgeed. gacantada iska hoorso adaa gaal waxu bixiyo ku noole. somalia waanu u duceyneyna in dhibta gacmo ku rimiska allaha weyni ka dul qaado.
Walaalku in uu macaanyahay ninki madi ah baa og, walaalo is nacayna way xabaalo badiyaan oo xoolo yareeyaan.
Soomaalida hadda jirta waxaa maandooriye ay ku marqaanto u noqotay oo ayna ugu baxdaa qabyaaladda oo ay wax walba kuqiimayso, isku caaydo, isku haaraamto, isku habaarto, colaad aan jirinna iskaga dhex huriso.
Shaki kumajiro in reer kasta oo Soomaaliyeed 1 mise 3 milyan oo doollar iska uruurin karo, waxaa se Soomaalida sixun useeggan sawirka guud ee ah in haddii ay qaran noqoto aysan Khaaliga uuntay mooyiye cid kaleba wax uga baahnayn, awoodi lahaydna in ay balaayiin doollar isla suuqa dhaqaale ee dhexdeeda ah ka kasbato oo nolosheeda ku tayaysato.
– Qarnii hortii ayay Soomaalidu awoodday in ay Carabta Khaliijka u gurmato oo una qaaraanto.
– Qarni hortii ayay Soomaalida rubuceed iskusintay heer ay shan maraakiibta dagaal ee casrigaas ugu casrisanaa iibsato.
– Qarniyo hortood ayay maraysay maqaam ay imbeeratooyiradaha Abisiiniya iyo Yurub oo huwan ahaa iskaga caabbiso oo ciidda afka u darto.
– Qarniyo hortood ayay maraysay heer ay imberatooriyaddii xabashiyeed hilibka qeyriin badday markii ay macluulisay.
– 40 sanadood hortood ayay joogtay heer ay huwantii Itoobiyaanka, Ruushka, Kuubbaanka, iyo Kuuriyada Woqooyi iskugu jiray qummaati iskaga caabbisay oo Addis dib ugu riixday.
Dadka uu Rabbi (SWT) sidaa u faddilay ayaannu nahay, maantana reer-reer ayaannu warmaha iskula hortaagannahay oo caalamkii geesinimada nagu qaddarin jiray hortiisa isku ceebeysannahay.
Waannu awoodnaa in aannu magaalooyinkayaga dhammaantood kasoo saaranno Dubai iyo Abu Dabey oo lawaayo nafar keliya oo Soomaaliyeed oo dal kale kuharay. Waxaa inagaxiga oo keliya annaga oo inta caadifadaha maran ka baxno, caqligeenna kaashanno oo naqshadka guud iyo taariikhdeenna dahabiga ah wax kuqiimeynno.
Haddii ay Soomaaliyi beel-beel iyo reer-reer keli ahaantooda wax ku noqon karto, maanta caaddaas ayaannu wada mari lahayn; laakiin 30kaa sanadood ayaa cashar noogufilan.
Waa ramadaan xumaanta joojiya.
Ilaah ka yaaba.
Soomaali waa walaalo cuqdada joojiya kuwiina meelaha wax ku soo qor qora.